ဆရာဝန္ေတာင္ မယံုနိဳင္တဲ႔ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနေသာအဆီမ်ားကို ရွင္းထုတ္ျခင္းကို နိဳင္တဲ႔ ၾကြက္နား႐ြက္မႈိ...! - Thadin
HomeHEALTHYဆရာဝန္ေတာင္ မယံုနိဳင္တဲ႔ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနေသာအဆီမ်ားကို ရွင္းထုတ္ျခင္းကို နိဳင္တဲ႔ ၾကြက္နား႐ြက္မႈိ…!
ဆရာဝန္ေတာင္ မယံုနိဳင္တဲ႔ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနေသာအဆီမ်ားကို ရွင္းထုတ္ျခင္းကို နိဳင္တဲ႔ ၾကြက္နား႐ြက္မႈိ…!
February 6, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on ဆရာဝန္ေတာင္ မယံုနိဳင္တဲ႔ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနေသာအဆီမ်ားကို ရွင္းထုတ္ျခင္းကို နိဳင္တဲ႔ ၾကြက္နား႐ြက္မႈိ…!
ေက်ာ္မသြားနဲ႔ ဖတ္ပါ…မိမိ friends မ်ားအတြက္ရွယ္ေပးပါ..
ဒီလိုနဲ႔ ၃ပတ္အၾကာ ဆရာဝန္ဆီျပန္ျပေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပိတ္ေနတဲ့ နွလံုးေသြးေၾကာ ၃ေခ်ာင္းလံုးဟာ လံုးဝျပန္ပြင့္သြားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဆရာဝန္ကမယံုလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္စစ္ေပမဲ့ အံ့ၾသစြာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ေသြးေၾကာေတြ ရွင္းလင္းေကာင္းမြန္ေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုမ်ား လုပ္လိုက္တာလဲဗ်ာလို႔ကို ေမးယူရပါတယ္။
ဟုတ္ကဲ့၊ ကြၽန္ေတာ္ဒီရက္ပိုင္းေလးအတြင္းမွာ ၾကြက္နား႐ြက္မႈိကို ေန႔စဥ္နဲနဲစီ စားခဲ့တာပါပဲဗ်ာလို႔ သူကျပန္ေျပာေတာ့ ဆရာဝန္ကသူ႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ လက္ဆြဲနႈတ္ဆက္လိုက္ရပါတယ္။
နွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို အလြယ္တကူေျဖရွင္းေပးလိုက္တာကေတာ့ ၾကြက္နား႐ြက္မႈိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးေၾကာေတြထဲမွာ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ အနည္အနွစ္ေတြက္ိုႂကြက္နား႐ြက္မႈိက လြယ္ကူစြာရွင္းလင္းေပးပါတယ္။
credit -သင့္အတြက္က်န္းမာေရး, All credit goes to original writer
ကျော်မသွားနဲ့ ဖတ်ပါ…မိမိ friends များအတွက်ရှယ်ပေးပါ..
အရင်အပတ်က နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်။ ဒီအပတ်မှာတော့ အဲဒီ့လိုပိတ်ဆို့နေတာကို အလွယ်တကူရှင်းထုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ နည်းကောင်းတစ်ခုကို ပေးပါမယ်။
America မှာ ချမ်းသာတဲ့တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဘဲသားစတဲ့ ကုန်းသတ္တဝါအသားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အမြဲတန်းစားလေ့ရှိသူပေါ့။
လှုပ်ရှားမှုကလည်း သိပ်မရှိဘဲ ဇိမ်ခံတာသာများတယ်။ အသက်နဲနဲရလာတော့ ရင်ဘတ်ကအောင့်အောင့်လာတယ်။ ဒါနဲ့သူလည်း ဆရာဝန်ကိုသွားပြရတာပေါ့။ ဆရာဝန်ကစစ်ကြည့်လိုက်တော့ နှလုံးသွေးကြောတွေ ၃ချောင်းလုံး 90% ပိတ်နေပြီ။ ခွဲစိတ်ကုသမှရမယ်ဆိုပြီး သူကိုရက်ချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သူလည်း စိတ်တော်တော်ညစ်သွားပြီး တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးတွေဆီကို သွားပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးက သူ့ကိုနေ့စဉ်ကြွက်နားရွက်မှိုကို စားခိုင်းပါတယ်။ ဘာဟင်းချက်ချက် ကြွက်နားရွက်မှိုသုံးလေးခုလောက် ထည့်ချက်ပြီး စားခိုင်းတော့ သူလည်းမပျက်မကွက် စားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၃ပတ်အကြာ ဆရာဝန်ဆီပြန်ပြတော့ သူ့ရဲ့ပိတ်နေတဲ့ နှလုံးသွေးကြော ၃ချောင်းလုံးဟာ လုံးဝပြန်ပွင့်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်ကမယုံလို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်စစ်ပေမဲ့ အံ့သြစွာကောင်းလောက်အောင်ပင် သွေးကြောတွေ ရှင်းလင်းကောင်းမွန်နေတာ တွေ့ရတော့ ခင်ဗျားဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်တာလဲဗျာလို့ကို မေးယူရပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ကြွက်နားရွက်မှိုကို နေ့စဉ်နဲနဲစီ စားခဲ့တာပါပဲဗျာလို့ သူကပြန်ပြောတော့ ဆရာဝန်ကသူ့ကို အကြိမ်ကြိမ် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကို အလွယ်တကူဖြေရှင်းပေးလိုက်တာကတော့ ကြွက်နားရွက်မှိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြောတွေထဲမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အနည်အနှစ်တွေက်ိုကြွက်နားရွက်မှိုက လွယ်ကူစွာရှင်းလင်းပေးပါတယ်။
အသက်ရလာပြီဆိုရင်သွေးကြောတွေထဲမှာအနည်တွေထိုင်လာပြီးသွေးကြောကျဉ်းလာကြတာချည်းပဲ။အဲဒီ့ရောဂါနဲ့ပဲသေကြရတာလည်းများပါတယ်။ကြွက်နားရွက်မှိုကအဲဒီပြဿနာကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ အိမ်မှာ လူကြီးမိဘတွေရှိရင်ကြွက်နားရွက်မှိုကိုကျွေးပါ။ အသက်ရှည်ပါလိမ့်မယ်။
credit -သင့်အတွက်ကျန်းမာရေး, All credit goes to original writer
ဆီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြကို ၅ မိနစ္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေစမည့္ ေဆးနည္း…!
တရုတ္မွ ၀င္လာသည့္ ၀ါဂြမ္းနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ၾကက္သားမွ်င္ အတုမ်ား ဖမ္းမိ…!
This Year : 176125
Total Users : 535149
Total views : 2419806